What do you know about the job that you apply for?
Tags: What know type of job apply understand.
ကိုယ်လျှောက်တဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ သိသလဲ။ ဘယ်လောက်လေ့လာထားသလဲ ဆိုတာ ကိုမေးတဲ့ မေးခွန်းပါ။ အရေးကြီးတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။ အဖြေကောင်းကောင်း ပေးနိုင်ဖို့ဆိုရင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ကောင်းကောင်း လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အကောင်းဆုံးအဖြေအတွက် အမှန်ဆုံးနည်းလမ်းက ကုမ္ပဏီက ထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းအချက်အလက် တွေကို လေ့လာပါ။ မှတ်သားပါ။ ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမယ့် အကြောင်းအရာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ။ အမှန်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်တွေကို ရယူနိုင်တဲ့ နေရာက ကုမ္ပဏီ website ဖြစ်ပါတယ်။ အခြားနည်းလမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ထုတ်ကုန်များ၊ နှစ်ပတ်လည် ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ စတာတွေကို လေ့လာခြင်းကနေလည်း သိနိုင်ပါတယ်။